Luis Enrique oo ka hadlay suuqa kala iibsiga ee janaayo – Gool FM
Liibaan Fantastic November 5, 2016
(Barcelona) 05 Nov 2016 Tababaraha kooxda Barcelona ee Luis Enrique ayaa ka hadlay suuqa kala iibsiga ee bisha janaayo iyo in kooxdiisu ay soo iibsan doonto ciyaartoy hor leh.
Barcelona ayaa la dhibtoonaysa dhaawacyo hareeyay kooxda, waxaana la xaqiijiyay in 5-laacib oo muhiim ah ay seegi doonaan kulanka habeen dambe ee Sevilla.
Iniesta, Pique, Alba, Vidal iyo Mathieu ayuu xaqiijiyay tababare Luis Enrique inay dhaawac uga maqnaan doonaan kulanka Sevilla.
“Ma jirto fursad ay taam ugu noqon karaan ciyaartoyda dhaawaca ku maqan kulanka Sevilla, sidaas darteed sifiican ayaan u garanaynaa ciyaartoyda taamka ah, waxaanan diyaarinay ciyaartoydii badali lahaa” ayuu yiri Luis Enrique ka hor ciyaarta.
Tababaraha reer Spain ayaa la waydiiyay inuu ku qasbanaan doono inuu kooxda uga soo adeego suuqa janaayo, wuxuuna ku jawaabay:
“Barcelona waa koox u baratay inay suuqa u gasho ku guulaysiga xirfadlayaasha, laakiin taasi waxay ku xirnaan doontaa inaan helno laacib soo jiidasho leh isla markaana qiimihiisu uu macquul yahay, haddii taasi ay dhacdo markaas ayaan ka fikiri doonaa galitaanka suuqa”.